အာဖျံကွီးလဲ ဘာဖြစ်လို. ဒီလိုဖြစ်တာလဲလို. စဉ်းစားလိုက်တော့ … အာလာလာ … လိုင်းကားပေါ်မှာ … စွပ်ကျယ်နဲ. ကုလားဝတုတ်ကြီးတစ်ယောက်ဗျာ … တန်းလေးကိုင်ပီး အာဖျံကွီးဘေးမှာ မတ်တပ်ကြီးရပ်လို. … အာဖျံကွီးရဲ.ခေါင်းက ကုလားဝတုတ်ကြီးရဲ. ချိုင်းအောက်မှာ …….. :D :D :D
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဘာမျှော်လင့်ချက်မှမရှိ၊ ပြောမနာဆိုမနာ၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ. အပြန်အလှန် ကူညီရိုင်းပင်းတတ်ကြတာ "တူနယ်ချင်း" ဘဲ။ :D